एमालेका विद्यासुन्दरले सथप लिएकै दिन किन काटियो प्रचण्ड निवासको बत्ती ?
ARCHIVE, POLITICS » एमालेका विद्यासुन्दरले सथप लिएकै दिन किन काटियो प्रचण्ड निवासको बत्ती ?
काठमाडौं - गत कात्तिक देखि लोडसेडिङ मुक्त छ काठमाडौंमा बुधबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एकाएक बत्ति गयो । एक पटक पनि हैन पटकपटक बत्ती गयो । राति एक घण्टाकै बीचमा तनिपटक बत्ती गएपछि प्रधानमन्त्री निवासमा एउटा रमाइलो चर्चा सुरु भयो । अब काठमाडौं उपत्यकाको बिजलुी व्यवस्थापन पनि महानगरकै जिम्मामा छ । प्रधानमन्त्रीका केही सहयोगीले विद्यासुन्दर आउने बित्तिकै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुने अड्कलबाजी गरे । किनभने बुधबार नै हो एमालेबबाट निर्वाचित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सपथ लिएका थिए र बालुवाटारको बत्ति पनि बुधबार नै गयो । यो संयोग मात्र हो योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको सड्यन्त्र ?
‘विद्यासुन्दरले सपथ लिनु र बालुवाटारमा अहिलेसम्म नगएको बत्ती जानु संगोग मात्रै हो कि यसमा केही कारण छ भनेर अनौपचारिक कुरा भयो’, प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । त्यति मात्र होइन प्रचण्ड पुत्रले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटससम्म लेख्न भ्याएछन । बालुवाटारमा बुधबार राति लोडसेडिङ भएको प्रधानमन्त्री पुत्र दाहालले फेसबुक स्टाटसबाट पनि प्रष्ट पारेका छन् । ‘उफ बालुवाटारभित्रै बत्ती जान थाल्यो १ घण्टामा ३ चोटी । काठमण्डुमा खै कुन्नी मेयरले सपथ खाएकै दिन के भएको हो’, प्रकाशले लेखेका छन् ।